Home » Creative Writing » ညမင်းသားနှင့် ညဆန္ဒ
Posted by alinsett on Jul 11, 2015 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., History, My Dear Diary | 29 comments
ညမင်းသားရဲ့ မှတ်စုများ -2အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
ဘာရီးမြန်းလား။ သူ့ရီးဇားဆိုတာကကော အဲ့မိန်းမဘာရီးမြန်းလားဆိုတာသိပါ့မလား
မထင်နဲ့နော် တချို့ ဘာရီးဆီက ဘာရီးမှန်းသိသိရီးနဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးယူနေတဲ့ ယောက်ကျားတွေရှိတာ…. အာ့ဂျောင့်လဲ ဟိုက ပိုးစိုးပက်စက်နိုင်တာ ဖြစ်မှာ
အမလေး… ယောက်ျားပိုင်းလုံးဆိုတာတွေက သဝန်တိုပြိး ပြဿနာရှာတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး…
ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံရှိတယ်.. ရုပ်မချောဘူး.. ယောက်ျားကို ပေးပေါင်းတယ်… ပေးလည်းပေးတယ်… ဟောက်လည်းဟောက်တယ်… အထက်ဆီးက ဆက်ဆံတယ်..
ပြည့်တန်ဆာလိုလည်း ..ပြတ်ပြတ်သားသား.. ငွေယူပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ဆားဗစ်ပြန်ပေးတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်..။
လူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ လူ့သဘောကို နောကြေသွားရင် အဲဒါအမြတ်ပဲ။
.ကားသမားဖြစ်တာ ကောင်းတယ် ။ ဘ၀အတွေ့အကြုံ စုံတယ်တဲ့
.ရေးစရာတွေလည်း အများကြီးပဲ ရတယ်အစ်မရေ။
ဖျပ်ကနဲ ခဏတွေ့လိုက်တာလေးနဲ့ အတွေး တွေ ဆက်ကုန်ပါပေါ့လား
…”ခပ်ကြမ်းကြမ်း မိန်းမတွေနဲ့တွေ့ပြီး မင်းကို အတင်းဆွဲစိမှာ မကြောက်ဘူးလား”.ဆိုတော့ကာ ..ကားဆရာရုပ်လေးက သန့် ပြီးအပြောချိုတာကိုးကွယ်.. .ဆင်ခြင်ရမယ် .အဲ့မျိုးက ဒိန်းဂျား .
မမကြီး ကို နေ့တိုင်း ကြိုပို့ လုပ်ပေး ပါလို့ အော်ဒါ ပေးမသွားတာ ကံကောင်း
အလကားတော့ အကြိုအပို့ မလုပ်နိုင်
ညမင်းသား တော့ ညမင်းသမီး ဇာတ်လမ်း တွေ နဲ့ မပျင်းရတော့ဘူးပေါ့။
ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ လူ့ဘဝ ဇာတ်ခုံ အစုံစုံပါပဲ အရီးမြရေ
.ညဖက်မောင်းတာဆိုတော့ ဟိုဟာတွေ တွေ့ဖို့ချန့်စ် များတယ်..
.မှတ်ချက်။ ဟိုဟာ= အမူးသမား
အမူးသမား မဟုတ်တဲ့ ဟိုဒင်းတွေလည်း တွေ့တယ်
အဲ အဲ့လိုအဖြစ်လည်း တခါကြုံဖူးပါတယ်။
ဒညင်းဝက်က ပျော့်စိစိသွားလုပ်တော့ ဟိုက ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ဆွဲမစိလိုက်တာ ကံကောင်း ဟိဟိ။
နာ ပျော့စိစိ ဆိုတာ
အနော့ချစ်ချစ်လေးနဲ့ 